बाल विकास अभिभावकका हातमा- विचार - कान्तिपुर समाचार
बाल विकास अभिभावकका हातमा
फाल्गुन २०, २०७५ बालिका थपलिया
काठमाडौँ — जीवन प्रवेशको पहिलो अवस्था एकदम संवेदनशील हुन्छ । आमाको पेटमा रहँदादेखि दुई वर्षको पुग्दा शिशुमा अस्सी प्रतिशत दिमाग विकसित भइसकेको हुन्छ । दिमागको बाँकी बीस प्रतिशत विकास त्यसपछिको उमेरमा हुने गर्छ । त्यसैले त्यो अवधिलाई सुनौलो हजार दिन भनिन्छ । यी दिनलाई साँच्चिकै सुनौलो बनाउन अभिभावकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
बाल्यावस्था हाम्रो जीवनको आकार निर्धारण गर्ने फ्रेम हो, सर्वाङगीण विकासको प्रवेशद्वार पनि हो । यो प्रवेशद्वारलाई जति राम्रो बनाउन सकियो, बालबालिकाको भविष्य त्यति नै उज्ज्वल हुने सम्भावना हुन्छ ।
बालबालिका भोलिका दिनमा हरेक कुरामा सक्षम होउन् भन्नका लागि सानैदेखि धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
उनीहरूको चौतर्फी विकासका लागि खान, लाउन र स्वास्थ्य सम्बन्धी हेरचाहमात्र पर्याप्त हुँदैन । मायाममता, अन्तरक्रिया, खेलकुद, मनोरञ्जन, अवलोकन, सिर्जनशीलता आदि बाल विकासका अपरिहार्य तत्त्व हुन् । अभिभावकले बढी सावधानी ती अपांग नहोऊन् भन्नेमा पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सामान्य हेलचेक्र्याइँले पनि बालबालिकामा अपांगता निम्तिन सक्छ ।
बालबालिकाको वृद्धिको अवस्थालाई मापनका लागि त्यसलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरिएको छ । सबैभन्दा सुरुमा शिशुले हाँस्न सिक्छ । मुन्टो उठाउन थाल्छ । पल्टिन थाल्छ । बामे सर्छ । चिजबिज पक्रन्छ । बसेर खेल्न थाल्छ । खेलौना मनपराएर खेल्छ । हातमा परेका सबै चिजबिज चुस्न र खान खोज्छ । विभिन्न वस्तु समाउन विशेषगरी दुइटा औंलाको प्रयोग गर्छ ।
प्रायः नौ महिना पुगेपछि दाँत उम्रिन सुरु गर्छ । शिशु बामे सर्दै जतासुकै पुग्छ । सहारा लिएर उभिन खोज्छ । आमा र परिचित व्यक्तिको स्वर सुने प्रतिक्रिया देखाउँछ । एक वर्ष पुगेपछि विस्तारै हिँड्न खोज्छ । बाबा, आमा, दादा, मामाजस्ता सजिला शब्दहरू बोल्न थाल्छ । एक वर्षपछि शिशुको खुट्टा, पिठ्युँ र मस्तिष्कको वृद्धि हुन थाल्छ । अनि एक्लै घरवरिपरि हिँड्न थाल्छ । भुइँका चिजबिज टिपेर मुखमा हाल्छ । घरका सबै सदस्यसँग हाँस्न र खेल्न थाल्छ ।
दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेपछि शिशु अभिभावकहरूसँग नजिक हुन थाल्छ । सानो वाक्य बोल्न थाल्छ । सामान यताउता सार्छ, अनि आफ्नो सामान चिन्न र भन्न सक्छ । अरुले बोलेका सरल शब्द दोहोर्‍याउने प्रयास गर्छ । आफू नजिकको वस्तुसँग बढी खेल्छ ।
तेस्रो वर्ष लागेपछि बच्चा जिज्ञासु हुन्छ र धेरै प्रश्न सोध्न थाल्छ । नजिकका छिमेकी चिन्छ र त्यतै जान मनपराउँछ । सामान्य खेल खेल्न रुचाउँछ । सानातिना प्रश्नको उत्तर दिन सुरु गर्छ । आफ्ना खेलौनालाई माया गर्छ । खेल्ने साथी खोज्छ । अलि लामा वाक्य बोल्न थाल्छ र अभिभावकले गरेको कामको नक्कल गर्न थाल्छ ।
बच्चा चौथो वर्षमा प्रवेश गरेपछि दिसापिसाब आएको, बिरामी भएको बारे भन्न थाल्छ । आफूलाई खान मनलागेका खानेकुरा खान थाल्छ । आफै लुगा लगाउने प्रयास गर्छ । अलिअलि लेख्न र पढ्न कोसिस गर्छ । रङ चिन्छ । बच्चाको अभिव्यक्ति क्षमता विस्तारै बढ्दै जान्छ । पाँचौं वर्षमा प्रवेशसँगै साथीहरूको हुल बनाएर हिँड्न मनपराउँछ । विद्यालयमा साथीभाइमाझ भएका क्रियाकलापलाई घरमा ल्याएर सुनाउँछ ।
बालबालिकाले परिस्थिति अनुसार स्नेह, उत्सुकता, खुसी, माया, हाँसो, क्रोध, भय, शोक, इर्ष्या, चिन्ता, डर, आँसु प्रकट गर्ने गर्छन् । स्वस्थ बालबालिकाको उमेर वृद्धिसँगै विभिन्न पक्षमा वृद्धिको स्तर बढ्दै जान्छ ।
उमेर अनुसारको क्रियाकलाप भएन भने बालबालिकामा समस्या हुनसक्छ । त्यसैले अभिभावकले कुन उमेरमा बालबालिकाको कस्तो खालको वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने जानकारी राख्नु अपरिहार्य हुन्छ । आफ्ना सन्तानले उमेर अनुसारको क्रियाकलाप गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेबारे अभिभावकहरू चनाखो हुनु अत्यावश्यक छ । बेलैमा कुनै समस्याको पहिचान हुनसके उपचारमा लाग्ने समय र खर्च जोगाउन सकिन्छ ।
बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, भाषागत जस्ता सबै पक्षमा विकास हुनु जरुरी हुन्छ । राम्रो स्वास्थ्य नै बाल विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सर्त हो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७५ ०७:५६
फाल्गुन २०, २०७५ सुरेशराज शर्मा
काठमाडौँ — अहिले जति पनि देश विकसित छन् र जतिले विकास गरिरहेका छन्, तिनले गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण यो उपलब्धि हासिल गरेका हुन् । शिक्षामा ज्ञान वृद्धि गर्ने एउटा फाँट छ, सीप विकास गर्ने अर्को फाँट छ । ज्ञानबर्द्धक शिक्षा कक्षाकोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशालामा केन्द्रित हुन्छ भने सीपमूलक शिक्षा वर्कसप, कृषि फार्म, अस्पताल र औजारमा ।
हामीले नेपालमा दुवै फाँटको विकासमा उत्तिकै जोड दिने भन्यौँ, तर सीप केन्द्रित शिक्षाको फाँटलाई अपेक्षित रूपमा सही लिकमा राख्न सकेनौँ । हामी अहिले यान्त्रिक युगमा छौँ, तर शिक्षालाई गैरयान्त्रिक गियरमै राखिछाडेका छौँ ।
कृषिकै कुरा गरौँ । हामी चार दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा थियौँ । जुटका वस्तु निर्यात गर्थ्यौं । त्यो घट्दै गयो । अलिपछि आएर गलैँचा र पस्मिना निर्यात गर्नेमा पुग्यौँ । त्यो पनि अहिले घटेको छ । यो बेलासम्म कृषि औजार कारखाना, कागज कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना, कपडा उद्योग निर्यातमुखी भइसक्नुपर्ने थियो । तर तिनलाई पनि बन्दै गर्‍यौँ ।
व्यापार सन्तुलनमा हाम्रो स्थिति भयावह छ । अहिले त अदक्ष र अर्धदक्ष युवालाई विदेश पठाएर आएको रेमिट्यान्सले आयातित वस्तुको खर्च धानेका छौँ ! यो स्रोत बलियो भएको छैन र दिगो पनि छैन भन्ने कटुसत्य बुझेका छौँ । तैपनि वस्तु आयात गर्दा भएको भन्सारको आम्दानीले अर्थतन्त्र धान्न खोजिरहेका छौँ । हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छैन । किनकि उत्पादनको वृद्धिमा आधारित अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।
उद्योग र व्यवसाय त झन् ओरालो लाग्दै बन्द हुनेतिर उन्मुख छन् । हामी धनी गनिँदै आएका कालिगडी र हस्तकलाका क्षेत्रमा पनि तलतल जाँदैछौँ । अब सबै कुरा आयातमुखी पो हुँदैछ !
अर्कातिर सहरीकरणको वेग बढ्दै गएको छ । सहरीकरणले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट युवालाई सहरतिर ल्याउँदैछौँ । तर तिनको उपयोग औद्योगिक उत्पादनका लागि गर्नसकेका छैनौँ र ती विदेशतिर पलायन भइरहेका छन् । सिँचाइको सुविधा बढाएर तिनलाई
कृषि उत्पादनमा लगाउनसके देशको कायापलट हुन समय लाग्दैन । तिनलाई खर्क–खर्कमा भेँडा र चौँरी उत्पादनमा पनि लगाउनसके !
सीपमूलक शिक्षाको धार जति बलियो हुन्छ, तल्लो वर्ग त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ । गरिबमुखी कार्यक्रम बलियो हुनु भनेको निम्न आर्थिक अवस्थामा रहेकालाई उकास्न खोज्नु हो । त्यसबाट श्रमको आकार बढाऊनु, श्रमशक्तिलाई निरन्तर सशत्तीकरण गर्दै लैजानु हो । यो काम अहिलेको शिक्षाले गर्न सकिरहेको छैन ।
सन् १९६० को दशकको सुरुआततिर हाम्रो मुलुकमा सीपमूलक तीन–चार संस्था थिए । त्यसताका बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको हाताभित्रै मेकानिकल ट्रेनिङ सेन्टर (एमटीसी) र थापाथली टेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्थापना चीनले बनाउने ट्रलीबस, थापाथली–भक्तपुर हाइवे, वाग्मती पुलजस्ता यातायात निर्माण कार्यमा सघाउ पुर्‍याउन भएको थियो । त्यस्तै घरेलु औद्योगिक विभागले घरेलु उद्योग क्षेत्र हाताभित्रैका उद्योगलाई सघाउन तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि त्यही विभाग अन्तर्गत बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट खोलियो । यसले पनि आफ्नो उत्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँका औद्योगिक संस्थासितै जोडेर लग्यो । यो संस्थाले गर्दा नै बुटवल पावर कम्पनी र हिमाल हाइड्रो कम्पनी अस्तित्वमा आउनसके ।
यी सबै कार्यक्रम रोजगारी दिने संस्थासँग जोडिएका थिए । एमटीसी स्वीस सरकारको सहयोगमा, थापाथली टेक्निकल इन्स्टिच्युट जर्मन सरकारको सहयोगमा, घरेलु उद्योग विभाग नेपालको आफ्नै बलमा र बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट युनाइटेड मिसन टु नेपालको सहयोगमा बनेका थिए । त्यहाँबाट उत्पादन भएका व्यक्तिहरू कोही सरकारी सेवामा गएर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा रहे, कोही निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा लागे र कोही–कोही त बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटकै निर्देशकसम्म पनि भए ।
यस्तो कार्यक्रम नेपालको शिक्षा योजनाभित्र नमुनाका रूपमा रहनुपर्ने थियो । तर त्यसबेला प्रायः कुनै पनि अट्न सकेनन् । टेक्निकल इन्स्टिच्युट थापाथलीको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अट्न त अट्यो, तर आफ्नो सीपमूलक कार्यक्रमको चरित्र गुमाएर ।
त्यसैगरी सीपमूलक एवं स्कुल ड्रपआउट भएका युवालाई वैकल्पिक अवसर दिने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा स्थापित पूर्वाञ्चल धरानको इन्जिनियरिङ क्याम्पस तथा पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरा विश्वविद्यालयका स्नातक तहको कार्यक्रम बनाउन पुगियो । यी दुःखलाग्दा अनुभव हुन् । सीपमूलक शिक्षाको विकासका लागि यी संस्थाका उत्पादनलाई सही बाटो बनाइदिएर त्यसैको प्रशिक्षक बनाउन सकिएको भए कति राम्रो हुने थियो !
सरकारले यसै दिशामा काम गरिदिए, वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण चुलिएको यो बेला सीपले सज्जित युवालाई त्यता पठाउन सकिन्थ्यो र रेमिट्यान्स पनि बढ्ने थियो । सर्वोत्तम विकल्प त तिनलाई देशकै उत्पादनमूलक आर्थिक कार्यक्रममा लगाउन सकिन्थ्यो । हुँदा–हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने आकर्षक नारा दिएर फस्टाएको देखाउनु त कता हो कता, बन्द नै गर्नपुगेको सरकारी निर्णयलाई उपलब्धि भन्ने कि ठूलो गल्ती ?
अहिले पनि सरकारले सीपमूलक शिक्षा या तालिमलाई ज्ञानमूलक शिक्षाकै धारमा समेटेर लैजाने तरखर गरेको संकेत देखिँदैछ । होइन भने उद्योग र अन्य व्यवसायसितको साझेदारी यसरी गरिँदैछ भन्ने खाका देखिसकिन्थ्यो । त्यस्तो तालिम आर्थिक क्षेत्रसित आबद्ध भई गरेको भए सीप तालिमको खर्चमा उनीहरूसहितको साझेदारी हुने थियो ।
कार्यगत तालिमकै अनुभवको प्रावधानको खाका कोरिन्थ्यो । नत्र ७० प्रतिशतलाई सीफयुक्त जनशत्ति बनाउन १०–१५ हजार त्यस्ता संस्था बनाउने रूपरेखा, कहाँ–कहाँ बनाउने, प्रशिक्षक कहाँबाट ल्याउने र कसरी तयार गर्ने भन्ने मार्गचित्र पनि आइसक्थ्यो होला । ती संस्थाका उत्पादन गुणात्मक हुन झन्डै एक–डेढ लाख त प्रशिक्षक नै चाहिन्थे होलान् ।
गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जाने र फलचाहिँ सकारात्मक आओस् भन्ने नेपाली विकासको अनौठो शैली अझै पनि यथावतै रहला जस्तो छ ।
लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७५ ०७:५५